NOVENA USANTA RITA KWIMEKO EPHELELELEYO
Eyaziwa njengegqwetha lamatyala anzima, abantu beza kuye ukuba bangenelele kwiimeko abakholelwa ukuba akunakwenzeka ukuzenza. Yazi apha novena eya kwi-Saint Rita ngenxa yesizathu esinzima ebomini bakho.
1 Ukwazi: INovena eya kwi-Saint Rita
2 Umthandazo kuSanta Rita
3 Ngaba kunzima okanye akunakwenzeka? Yenza esi sivakalisi
4 Zeziphi izizathu ezinzima kunye / okanye ezothusayo?
Ukwazi: INovena eya kwi-Saint Rita
UMargarita Manchini, eyaziwa njenge ISanta RitaWayephila ubomi obuthobekileyo, ekwazi ukoyisa ezona meko zinzima awayejongana nazo ngenxa yokholo lwakhe oluqinileyo kuKristu nothando lwakhe ngaye.
Wayexolela abo bamonayo, kwaye walinda ngomonde ukudibana no Yesu. Wanikela ubomi bakhe ekukhathaleleni abagulayo besibetho esikhulu, kodwa engakhange asifumane esisifo, yiyo loo nto, kwamsinyane nje emva kokubhubha kwakhe, waqala ukuhlonitshwa kwaye abathembekileyo benza yethoba Saint Rita, ukucela uncedo kwezona meko zinzima.
Emva kokufa kwakhe, Ingcwele Rita yaseCassia Ihlonitshwe ngokuzinikela kwabathembekileyo, kuba yayikholelwa ukuba inika imimangaliso kwiimeko ezinzima, unyango olungummangaliso, njalo njalo. Ngale ndlela, ukuzinikela kwi ISanta Rita yanwenwela e-Italiya, emva koko yaya eYurophu, yaza kamva yaya naseMelika.
Ingcwele Rita yaseCassia Waba ligqwetha leemeko ezinzima, igqwetha lezizathu ezingenakwenzeka, umphilisi wabagulayo, kunye nokunxulumana nothando kunye nezibini.
UMargarita Manchini wenziwa umsulwa ngo-1900, kunye nomhlambi wakhe othembekileyo yethoba Saint Rita ukukucela ukuba ungenelele kwezona zinto zinzima okanye zingenakwenzeka, kwaye ubancede baphume kuzo.
"Hayi makhulu ISanta Rita, igqwetha elibizwa ngokuba ngamatyala aphelelwe lithemba, onceda amathemba okugqibela, indawo yokusabela nosindiso kwintlungu, ekhokelela enzonzobileni yolwaphulo-mthetho kunye nokuphelelwa lithemba: ngayo yonke intembelo yam kumandla akho asezulwini, ndijikela kuwe kwiimeko ezinzima nengalindelekanga ecinezela intliziyo yam kabuhlungu ”.
Ndixelele oh ISanta RitaAwunakundinceda? Ngaba awuyi kundithuthuzela Ngaba uya kuyithatha inkangeleko yakho kunye nosizi lwam entliziyweni yam, ukhathazeke ngokunzulu? Uyazi ukuba yintoni ukubulawa kwentliziyo, uxheleke kakhulu! ”.
“Ngenxa yosizi olumanyumnyezi, ngeenyembezi ezikrakra oziphalazayo ezingcwele, zize kundinceda. Thetha, thandaza, undithandazele, endingenobuganga bakukwenza, entliziyweni kaThixo, uYise wayo yonke inceba nomthombo wayo yonke induduzo, kwaye undiphe ubabalo endiludingayo (yithi ngeli xesha ubabalo oludingayo) ”.
Yenziwe, ngokuqinisekileyo uya kundimamela: kwaye ndiza kusebenzisa olu thando ukuphucula ubomi bam kunye nemikhwa yam, ukucula emhlabeni nasezulwini izibele zikaThixo. Bawo wethu, Bingelela uMariya noZuko.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Imithandazo yokubulela kuThixo ngenxa yeentsikelelo zakhe.
Ngaba kunzima okanye akunakwenzeka? Yenza esi sivakalisi
Kubalulekile ukukhankanya ukuba uSanta Rita unemithandazo emibini, owesibini ngulowo siza kukubonisa apha ngezantsi, oya kuba luncedo kakhulu kumaxesha anzima ojamelana nawo ebomini bakho.
"Phantsi kokuzisola kwentlungu yam, kuwe, enamandla ISanta Rita, Ndijika ndizithembile ukuba ndiza kuviwa. Khulula, ndiyakucela, ntliziyo yam ihluphekileyo kubunzima obuyicinezelayo, kwaye ubuyisele umoya wam uzolile, uzele kukukhathazeka.
“Nguwe, unyulwe nguThixo njengegqwetha lamatyala anzima. Ndiphe ubabalo endilucela kuwe (yithi okwangoku ubabalo luyafuneka) ”.
"Ukuba izono zam zingumqobo ekufezekiseni iminqweno yam, ndiphe kuThixo ubabalo lwenguquko noxolelo, ngokuvuma izono ngokunyanisekileyo."
"Sukundivumela ukuba ndiphalaze iinyembezi ezikrakra ixesha elide."
“Owu, ngcwele, ngameva nakwirosi, vuza ithemba lam elikhulu kuwe kwaye ndiyathembisa kuyo yonke indawo ukuba ndiya kuyazisa inceba yakho enkulu kwimiphefumlo ekhathazekileyo. Owu, mfazi kaYesu obethelelwe emnqamlezweni, ndincede ndiphile kamnandi ndife kakuhle ”.
Zeziphi izizathu ezinzima kunye / okanye ezothusayo?
Impendulo yalo mbuzo ayixhomekekanga kwinto emisela ukuba unobangela awunakwenzeka kwaye / okanye unesizathu esibi, esithetha ukuba oku kuya kuxhomekeka emntwini odlula kuwo.
Oko kukuthi, iya kuba ngumntu ohlangabezana nemeko oya kwazi ukuba yinto engenakwenzeka okanye enzima, apho bangaboni ndlela ilula yokuphuma kunye namava okubandezeleka nokuzisola.
Ngokubanzi, imithandazo yangaphambili isebenza ukunika abathembekileyo umbono wokuba bangacela ntoni, kwaye uSanta Rita uya kubathandazela phambi koThixo uYise, eshiya iingxaki kunye neemfuno zabo ezandleni zikaThixo.
Ngoku, into enokubuzwa emthandazweni lulo naluphi na ubabalo olwanelisa inkxalabo, kodwa uhlala ugcina ukholo oluzinikeleyo, kwaye ngaphandle kokulibala ukubulela uSanta Rita ngokucela, kunye noThixo ngokuphendula imithandazo esele yenziwe. Ukuze ufunde okungakumbi ngomthandazo, bukela le vidiyo ilandelayo: